अर्थ नीति पुँजी बजार समाचार
भर्चुअल क्वाइन पीआईको नाममा ठगी धन्दा राष्ट्र बैंक भन्छ : थाहा छैन
सम्झना घिमिरे काठमाडौं, १७ असार
अहिले नेपाली बजारमा पीआई नामक भर्चुअल क्वाइनको निकै चर्चा छ । पीआई नेटवर्क एप डाउनलोड गरेर सजिलै पैसा कमाउन सकिने भन्दै पछिल्लो २ हप्तादेखि नेपालीहरू धमाधम डाउनलोड गर्न ब्यस्त छन् । मुलुकमा भर्चुअल क्वाइन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको करिब ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा एकाएक 'सरकारले भर्चुअल क्वाइन प्रयोगमा ल्याएको' भन्दै पैसा कमाउन धमाधम डाउनलोड गरिरहेका छन् ।
त्यसो त डाउनलोड गरेर पीआई नेटवर्कमा प्रोफाइल बनाएकाहरू पनि आफूले यति कमाएको, उति कमाएको भन्दै फुर्ती लगाउनेको पनि कमी देखिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले भर्चुअल करेन्सीलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजेकै हो त भन्ने अन्योल अहिले सर्वव्यापी बन्दै गइरहेको छ ।
कति झुट, कति साँचो ?
नेपाल राष्ट्र बै‌ंकका अनुसार वास्तवमा नेपालमा पीआई नामक भर्चुअल क्वाइन प्रयोगमा छिट्टै ल्याउने भन्ने कुरा सरासर झुट हो । यो एउटा ठगीको धन्धा हो । बैंकका अनुसार अफवाहकै भरमा पीआई नेटवर्कको एप बेचाउने प्रचारात्मक रणनीति हो । नेपालमा कुनै पनि भर्चुअल क्वाइन राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना प्रयोगमा ल्याउन पाइँदैन ।
राष्ट्र बैंकलाई पीआई क्वाइनका बारे अहिलेसम्म कुनै जानकारीसमेत छैन । राष्ट्र बैंकका मुद्रण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाललाई आफूहहरूलाई पीआई भर्चुअल क्वाइनका बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।
उनले भने, 'हामीलाई त्यस्तो कुनै भर्चुअल करेन्सीको प्रयोगबारे कुनै जानकारी आएको छैन । यदि त्यस्तो कुनै करेन्सी प्रयोगमा ल्याइँदै छ भनेर एप डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न भनिँदै छ भने त्यो सरासर ठगी हो ।’
मुद्रा नियमन विभागलाई नै यो नयाँ पीआई करेन्सीका बारेमा थाहा नभएपछि यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
के हो पीआई करेन्सी, कहाँबाट आयो ?
वास्तवमा पीआई करेन्सी अमेरिकाको स्टान्फोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ३ जना विद्यार्थीले बनाएका हुन् । पीआई नेटवर्कको नाममा बनेको यो एप विदेशी एप हो ।
विदेशमा यस्ता धेरै प्रकारका भर्चुल पैसाको कारोबारलाई मान्यता दिँदै आएको छ । विश्वमा १६ सय प्रकारका भर्चुअल करेन्सीलाई विभिन्न देशहरूले प्रयोगमा अनुमति दिएका छन् ।
तर, नेपालको परिवेशलाई हेर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि भर्चुअल करेन्सीलाई प्रयोगका लागि मान्यता दिएको छैन । नियामक निकायको स्वीकृतिविना नै नेपालमा प्रयोगमा ल्याउनु अवैधानिक हो ।
मानिस किन पछि लागिरहेका छन् ?
मोवाइलमा पीआई नेटर्वक एप डाउनलोड गरेर नि:शुल्क खाता खोल्न सकिन्छ । यसरी खाता खोलिसकेपश्चात् डाउनलोड गर्ने व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई इन्भाइट गरेर उक्त व्यक्तिले पनि सो एप डाउनलोड गरेमा पहिलो व्यक्तिको खातामा पीआई अर्थात् भर्चुअल पैसा जम्मा हुन्छ ।
यसरी घरमै बसेर सजिलै कसैलाई इन्भाइट गरेकै भरमा पैसा कमाउन सकिने भएपछि अहिले विशेषगरी नेपाली युवाहरू पीआई एप धमाधम डाउनलोड गरिरहेका छन् ।
नेपाली नियामक निकायलाई थाहा पत्तो नभईकन प्रयोगमा ल्याइएको यसलाई नेपाल सरकारले मान्यता नदिएसम्म यो अवैधानिक नै ठहरिन्छ । अवैधानिक भएपश्चात् विश्वास गर्न सकिँदैन । र, तपाईंले पैसा कमाए पनि पाउनुहुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन ।
अहिले यसको लिंकसहित इन्भाइट गर्दा विभिन्न खालका म्यासेजहरू पनि आउने गरेका छन् । लिंक पठाउँदा आउने म्यासेज हेर्दा पठाउने व्यक्ति एकाएक धनी भएको र छिट्टै तपाईं पनि धनी बन्न सक्नुहुनेछ भन्ने खालका म्यासेज आउने गरेका छन् । यसरी म्यासेज पठाउनेले भने त्यो म्यासेज लेखेको हुँदैन ।
भर्खरै प्रयोग गरेका एक पीआई एप प्रयोगकर्ताले आफूले कुनै पनि म्यासेज लेखेर नपठाए पनि इन्भाइट गरेको व्यक्तिलाई आफ्नो नाममा पैसा कमाएको म्यासेज गएको बताए ।
उनले भने, ‘सबैले पैसा कमाए भनेपछि मैले पनि डाउनलोड गरेँ । खाता बनाएपछि अरू साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गरेँ तर पैसा कमाएको भने अहिलेसम्म छैन । मैले इन्भाइट गरेको व्यक्तिलाई भने पैसा कमाइसकेको म्यासेज गएको रहेछ । यसरी खातावालाले कसैलाई इन्भाइट गरेपछि अटोमेटिक म्यासेज जाने हुँदा प्रापकमा विश्वासको वातावरण बन्ने गरेको छ ।’
यसरी आइरहेको छ म्यासेज
४० लाखभन्दा बढी मानिसहरू यसमा जोडिइसकेका र आउँदो मार्चमा नेपालमा लञ्च गरिने उल्लेख छ, जसमा यो प्रयोगको दोस्रो चरण भएको र यो चरणमा नि:शुल्क पैसा कमाउनेहरूले कमाएको पैसा पनि आउँदो मार्चदेखि प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ ।
परीक्षण चरणमा रहेको आई करेन्सी विश्वका १ सय ५० भन्दा बढी देशहरूमा ३५ भन्दा बढी भाषामा प्रयोगमा ल्याइएको पीआई नेटर्वकको दाबी छ तर नेटर्वकको वेवसाइटमा जाने हो भने त्यहाँ परीक्षणकालमा पैसा पाइने कुनै कुरा उल्लेख छैन ।
यता, राष्ट्र बैंक भने कुनै त्यस्तो नयाँ योजना नआएको बताउँछ । निर्देशक नेपालले नेपालमा तत्काल कुनै भर्चुअल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने भनेर कुनै योजना नल्याइएको बताए ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधनमा मुद्रा निष्कासन, परीक्षण र प्रचलनको अधिकार मात्र केन्द्रीय बैंकको रहनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । यसर्थ विदेशी मुद्रा नेपालमा विनाअनुमति परीक्षण वा प्रचलनमा ल्याउनु सरासर कानुनविपरीत कार्य भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, १७ असार २०७७, १०:४९:००